ShweMinThar: ကွမျးပိုးဆိုတဲ့ Bed Bugs
ကွမျးပိုးဆိုတဲ့ Bed Bugs
(Don’t be Bugged by Those Bugs! — Home Remedies for Bed Bugs)
(လူပေါငျးစုံနတေတျတဲ့ အဆောငျအခနျးတှမှော ကွမျးပိုးသောငျးကွမျးရငျ နလေို့ထိုငျလို့အဆငျမပွတော အမှနျတရားပါ။ သညျကွမျးပိုးတှကေို ရှငျးဖို့ဆိုရငျ ပိုးသတျဆေးဖွနျးတာ မွနျတယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့အိမျမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ရှငျးလငျး လို့ရသေးကွောငျး သတိပွုမိရအောငျ ရေးသားဝငှေလိုကျပါတယျ။)
နံနကျခငျးတိုငျး ယားယံတဲ့အဖုအခြို့ရယျ သှေးစို့နတေဲ့ အရာအခြို့ရယျတှမွေ့ငျနရေတယျဆိုပါစို့။ သူတို့တှကေ သှေးစုပျဖုတျကောငျတော့မဟုတျဘူး ဒါပမေဲ့ ကွမျးပိုးပါ။ သညျအကောငျလေးတှဟော အကိုကျခံရလို့ နမေထိထိုငျမသာ ခံစားရလို့ဆိုတဲ့ အကွောငျးတဈခုတညျးတော့မဟုတျပါဘူး အတေျာ့ကို ဂရုတစိုကျအလေးထားရမယျ့ပွဿနာတဈခုဖွဈ ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ တဈအိမျလုံးကို အလငျြအမွနျပှားမြားသှားနိုငျလို့ဖွဈပါတယျ။ ပိုးမှားသနျ့ရှငျးရေးကို Pro အဖွဈလုပျဆောငျနသေူမြားအတှကျကတော့ တဈခကျြတညျးနဲ့ရှငျးနိုငျတာပေါ့။
သညျလို Pro တှကေိုငှားရမျးပွုလုပျစဖေို့ဆိုတာကလညျး အမွဲစြေးမခြိုဘူးလနေျော။ သညျကွမျးပိုးတှကွေောငျ့ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈရတယျ အိပျရေးဝဝမအိပျရဘူးဆိုတာတှအေတှကျ သှေးအလဟဿကုနျနရေတာ ဖွရှေငျးဖို့ DIY Solutions အခြို့ရှိပါတယျ။ သို့သျော အရငျဆုံးတော့ ကြှနျတျောတို့အိမျရဲ့ ကွမျးပိုးခိုအောငျးနိုငျတဲ့နရော အတျောမြားမြားကို ဆနျးစဈဖို့လိုပါမယျ။
နံနကျခငျးတိုငျး အရပွေားမှာ ကိုကျရာသေးသေးလေးတှေ၊ ခေါငျးအုံးနဲ့ မှယေ့ာကွားတှမှော ခပျသေးသေး အညိုရောငျ သို့မဟုတျ အနီရငျ့ရောငျအစကျအပြောကျတှေ၊ ကွမျးပိုးသအေခြို့ရဲ့ အရခှေံခွောကျတှေ၊ ပွီးတော့ စုံထောကျဦးစံရှား ကိုငျနကွေ မှနျဘီလူး (a magnifying glass) ရှိရငျလညျး ကွမျးပိုးအရှငျတှဘေယျခြောငျဝငျနလေညျးကွညျ့ရမယျလေ။
လတျတလော အိပျရာတဝိုကျ ကွမျးပိုးသောငျးကွမျးနတေယျ ရှိနတေယျဆိုရငျတော့ စှနျ့စားရာကပြမေယျ့ လူတှကေို မထိခိုကျစတေဲ့ ဆေးအခြို့ ဒါမှမဟုတျ နညျးအခြို့ကိုသုံးဖို့ဆုံးဖွတျရပါတော့မယျ။ ဆေးဖွနျးမယျဆိုလညျး လကျအိပျစှပျ၊ Mask တပျ၊ ဆေးဖွနျးမယျ့နရောကလှဲလို့ အခွားပစ်စညျးတှကေို ဖုံးအုပျတနျသညျ ဖုံးအုပျရပါမယျ။ ပိုကျဆံသုံးဖို့ အဆငျပွမေယျဆိုရငျတော့ ပိုးမှားသနျ့ရှငျးရေး ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးကိုအပျလိုကျလို့ရတာပေါ့။
ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ဖွရှေငျးလို့အဆငျပွစေမေယျ့ နညျးလမျးအခြို့ကိုဝငှေလိုကျပါမယျ။ စမျးသပျလုပျကွညျ့ကွပါဗြို့။
(၁) ကွမျးပိုးအောငျးတဲ့နရောကို ခြုံ့ရပါမယျ။ အိမျဆောကျပစ်စညျးဆိုငျလေးတှမှော အလှယျတကူဝယျလို့ရတဲ့ လှဖောတဲ့ ပှဲညှကျကို ဝယျပွီး အခနျးနံရံနဲ့ ကွမျးပွငျကွားတှကေို ပိတျလိုကျပါ။ အခနျးထဲ ကယောကျကယကျဖွဈစတေဲ့ဟာတှကေို ဖယျရှားဖို့ အိုငျဒီယာကောငျးတဈခုပါပဲ။
(၂) မုနျ့ဖုတျဆျောဒါကို ကွမျးပိုးတှပေုနျးနိုငျမယျ့နရောတှကေို သသေခြောခြာပကျဖနျြးပေးပါ။ ခဏနကေပွောခဲ့တဲ့ လှဖောတဲ့ ပှဲညှကျလိုပစ်စညျးမြိုးတှေ ဝယျလို့မရတာ ဒါမှမဟုတျ အနံ့အသကျမခံစားနိုငျတာမြိုးတှအေတှကျ မုနျ့ဖုတျဆျောဒါ (baking soda)က အသုံးဝငျပါတယျ။ ကွမျးပိုးတှအေောငျးတဲ့ ကွမျးပိုးသိုကျနရောကို မုနျ့ဖုတျဆျောဒါမြားမြားလေးထား လိုကျခွငျးဖွငျ့ ကွမျးပိုးတှဖေယျရှားနိုငျတယျလေ။
(၃) အယျလျကိုဟောနဲ့ ကွမျးပိုးရှိနရောတှကေို စိုစှတျအောငျပှတျသုတျပေးနိုငျပါတယျ။ ကိုယျနဲ့တညျ့မတညျ့ မသိနိုငျတဲ့ ကွမျးပိုးသတျဆေးတှကေို ဝယျသုံးမိတာထကျ အယျလျကိုဟော (alcohol)နဲ့ပှတျသပျပေးခွငျးက ပိုအဆငျပွပေါတယျ။ ဓာတျမီးတို့ မှနျဘီလူးခုံးတို့သုံးပွီးကွမျးပိုးဥနရောရှာပွီး အရကျနဲ့စှတျပဈလိုကျဗြာ။
(၄) ပါကငျထုပျရာမှာသုံးတဲ့ တိပျ (duct tape) ကိုသုံးပွီးလညျး ကွမျးပိုးတှကေိုဖယျရှားလို့ရပါတယျ။ ပွငျညီမကျြနှာပွငျတှေ အတှကျကတော့ တိပျကို မကွီးမသေးလေးတှဖွေတျ၊ ကွမျးပိုးရှိတဲ့နရောမှာ လှမျးကပျယူ၊ တိပျတှအေားလုံးပွနျစုပွီး အိပျတဈလုံးနဲ့လုံအောငျထညျ့ကာ ခပျဝေးဝေးအမှိုကျပုံးထဲစှနျ့ပဈလို့ရတာပေါ့။
(၅) ရနံ့မှေးဆီအသုံးပွုတတျတယျဆိုရငျတော့ လာဗငျဒါအဆီ (Lavender Essential Oil) ကို ကွမျးပိုးတှပေုနျးနတေဲ့နရော မှာ အသုံးခနြိုငျပါတယျ။ လာဗငျဒါရနံ့ကို ကွမျးပိုးတှမေကွိုကျပါဘူး။ လာဗငျဒါရနံ့ဆီကို မသုံးခငျြဘူးဆိုရငျတော့ လတျလတျဆတျဆတျခူးထားတဲ့ လာဗငျဒါပနျးတှရေယျ အရှကျတှရေယျကို ပွဿနာဖွဈနတေဲ့နရောတှမှော ခပျကွဲကွဲဖွနျ့ ထားလိုကျပါ။
(၆) ပူဒီနာအရှကျ (mint leaves) တှအေသုံးပွုပွီးတော့လညျး ကွမျးပိုးတှကေိုနှငျထုတျလို့ရပါသေးတယျ။ ပူဒီနာရနံ့သညျ လညျး ကွမျးပိုးမြား မုနျတီးတဲ့ အခွားသောရနံ့တဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကွိတျခွထေားသော ပူဒီနာအရှကျတှကေို ကွမျးပိုးတှအေောငျးနတေဲ့နရောတှမှောထားပေးခွငျးဟာလညျး အိုငျဒီယာကောငျးတဈခုပါပဲ။ ဆိုဖာထောငျ့တှလေို၊ သတ်ေတာထောငျ့တှလေိုနရောမြိုးမှာ ပူဒီနာတှကေိုခွပွေီးထားလိုကျတာပေါ့။
(၇) ကိုယျ့အိမျမှာဆိုရငျတော့ ဖုနျစုပျစကျသုံးပွီး သူတို့ကိုရှငျးထုတျလို့ရတာပါပဲ။ လကျနှိုကျလို့မရတဲ့ ထောငျ့ခြိုးတှေ၊ နရောတှကေ ကွမျးပိုးကွီးတှနေဲ့ ကွမျးပိုးဥတှကေို စုပျထုတျလို့ရတယျလေ။ ပွီးရငျတော့ ဖုနျစုပျစကျကအိတျကို သခြောစညျးနှောငျပွီး ပလတျစတဈအိတျတဈခုထဲ သခြောထညျ့ပွီးမှစှနျ့ပဈရပါမယျ။ တဈခါသုံးပစ်စညျးတှသေုံးလို့ရရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့နျော။
(၈) ဖုနျစုပျစကျလိုမြိုးပဲ အိမျသနျ့ရှငျးရေးမှာသုံးတဲ့ Steam Cleaner သုံးပွီး ကွမျးပိုးကိုနှိမျနငျးလို့ရပါတယျ။ အဆိုပါပစ်စညျးက အပူခြိနျပွငျးပွငျးကို ကွမျးပိုးတှမေခံနိုငျပါဘူး။ အကွိုအကွား လကျမရောကျနိုငျတဲ့နရောက ကွမျးပိုးတှကေို နှိမျနငျးခငျြတဲ့အခါ Steam Cleaner ကိုအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
(၉) Steam Cleaner အိမျမှမရှိဘူးဆိုရငျလညျး ဆံပငျခွောကျအောငျသုံးတဲ့ လပေူမှုတျစကျ (hair dryer) ကိုသုံးလို့ရပါတယျ။ အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ hair dryer ဖွဈဖို့တော့လိုတယျဗြ။ ဘာကွောငျ့ဆို အပူခြိနျအမွငျ့ဆုံးခလုပျကိုသုံးပွီး ကွမျးပိုးတှရှေိတဲ့နရောကို မှုတျရမှာမို့ဖွဈပါတယျ။
(၁၀) အိပျရာခငျးတှေ၊ စောငျတှေ၊ လိုကျကာတှေ စသဖွငျ့ ကွမျးပိုးအောငျးခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးပစ်စယတှကေို ရပေူပူနဲ့လြှျောဖှတျ ပဈပါ။ အခွောကျခံဖို့ဆိုရငျလညျး နပေူပူ နပွေငျးပွငျးထဲလှနျးဖို့ သို့မဟုတျ အခွောကျခံစကျမယျ အပူခြိနျ အမွငျ့ဆုံးခလုပျ သုံးပွီး အခွောကျခံဖို့လုပျပါ။ စိတျမခဘြူးဆိုရငျ နညျးမရှိရငျတော့ အိပျရာခငျးတှေ စောငျတှကေို ပလတျစတဈအိတျထဲ လုံအောငျထညျ့ပိတျပွီး နပေူပူမှာထုတျလှမျးပေးရပါမယျ။
(၁၁) ကွမျးပိုးအောငျးခဲ့လို့ရှငျးလငျးထားတဲ့ ပစ်စညျးပစ်စယအစုံကို နပွေငျးပွငျးမှာထုတျလှမျးပါ။ ကွမျးခငျးကျောဇော၊ ပရိဘောဂအစိတျအပိုငျးတှေ၊ မှယေ့ာတှကေို နလေ့ယျနပေူထဲ ပဈထားလိုကျ တနကေုနျ။
(၁၂) မှယေ့ာတှေ၊ဆိုဖာတှကေို ပလတျစတဈနဲ့ ရကျအနညျးငယျလောကျ ဖုံးအုပျထားပေးပါ။ သညျနညျးလမျးက ကွမျးပိုးတှေ အထဲမှာ ပိတျမိနဖေို့လုံလောကျသလို သဆေုံးဖို့လညျး အကွောငျးဖနျပါလိမျ့မယျ။ ပရိဘောဂ ခပျသေးသေးတှကေိုလညျး သညျနညျးလမျးအတိုငျးပွုလုပျပေးထားနိုငျပါတယျ။
ကွမျးပိုးရှငျးရာမှာ တဈရကျတညျး ဆကျတိုကျရှငျးဖို့လုပျဖို့လိုတယျဆိုတာ သတိထားရပါမယျ။ ဘယျအဆငျ့ပွီးရငျ ဘယျဟာ ပွုလုပျရမယျဆိုတာလညျး ကွိုစဉျးစားထားရတာမြိုးရှိပါတယျ။ ကွမျးပိုးကငျးပွီး ကောငျးမှနျစှာ နထေိုငျအိပျစကျ နိုငျပါစလေို့ ဆန်ဒပွုပါတယျ။
Alex Aung (14 September 2020)
ကြမ်းပိုးဆိုတဲ့ Bed Bugs
(လူပေါင်းစုံနေတတ်တဲ့ အဆောင်အခန်းတွေမှာ ကြမ်းပိုးသောင်းကြမ်းရင် နေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေတာ အမှန်တရားပါ။ သည်ကြမ်းပိုးတွေကို ရှင်းဖို့ဆိုရင် ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းတာ မြန်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ရှင်းလင်း လို့ရသေးကြောင်း သတိပြုမိရအောင် ရေးသားဝေငှလိုက်ပါတယ်။)
နံနက်ခင်းတိုင်း ယားယံတဲ့အဖုအချို့ရယ် သွေးစို့နေတဲ့ အရာအချို့ရယ်တွေ့မြင်နေရတယ်ဆိုပါစို့။ သူတို့တွေက သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ ကြမ်းပိုးပါ။ သည်အကောင်လေးတွေဟာ အကိုက်ခံရလို့ နေမထိထိုင်မသာ ခံစားရလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး အတော့်ကို ဂရုတစိုက်အလေးထားရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်အိမ်လုံးကို အလျင်အမြန်ပွားများသွားနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးမွှားသန့်ရှင်းရေးကို Pro အဖြစ်လုပ်ဆောင်နေသူများအတွက်ကတော့ တစ်ချက်တည်းနဲ့ရှင်းနိုင်တာပေါ့။
သည်လို Pro တွေကိုငှားရမ်းပြုလုပ်စေဖို့ဆိုတာကလည်း အမြဲဈေးမချိုဘူးလေနော်။ သည်ကြမ်းပိုးတွေကြောင့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ် အိပ်ရေး၀၀မအိပ်ရဘူးဆိုတာတွေအတွက် သွေးအလဟဿကုန်နေရတာ ဖြေရှင်းဖို့ DIY Solutions အချို့ရှိပါတယ်။ သို့သော် အရင်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ ကြမ်းပိုးခိုအောင်းနိုင်တဲ့နေရာ အတော်များများကို ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါမယ်။
နံနက်ခင်းတိုင်း အရေပြားမှာ ကိုက်ရာသေးသေးလေးတွေ၊ ခေါင်းအုံးနဲ့ မွေ့ယာကြားတွေမှာ ခပ်သေးသေး အညိုရောင် သို့မဟုတ် အနီရင့်ရောင်အစက်အပျောက်တွေ၊ ကြမ်းပိုးသေအချို့ရဲ့ အရေခွံခြောက်တွေ၊ ပြီးတော့ စုံထောက်ဦးစံရှား ကိုင်နေကြ မှန်ဘီလူး (a magnifying glass) ရှိရင်လည်း ကြမ်းပိုးအရှင်တွေဘယ်ချောင်ဝင်နေလည်းကြည့်ရမယ်လေ။
လတ်တလော အိပ်ရာတ၀ိုက် ကြမ်းပိုးသောင်းကြမ်းနေတယ် ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ စွန့်စားရာကျပေမယ့် လူတွေကို မထိခိုက်စေတဲ့ ဆေးအချို့ ဒါမှမဟုတ် နည်းအချို့ကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ရပါတော့မယ်။ ဆေးဖြန်းမယ်ဆိုလည်း လက်အိပ်စွပ်၊ Mask တပ်၊ ဆေးဖြန်းမယ့်နေရာကလွဲလို့ အခြားပစ္စည်းတွေကို ဖုံးအုပ်တန်သည် ဖုံးအုပ်ရပါမယ်။ ပိုက်ဆံသုံးဖို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုးမွှားသန့်ရှင်းရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုအပ်လိုက်လို့ရတာပေါ့။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြေရှင်းလို့အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းအချို့ကိုဝေငှလိုက်ပါမယ်။ စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ကြပါဗျို့။
(၁) ကြမ်းပိုးအောင်းတဲ့နေရာကို ချုံ့ရပါမယ်။ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်လေးတွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ လှေဖာတဲ့ ပွဲညှက်ကို ၀ယ်ပြီး အခန်းနံရံနဲ့ ကြမ်းပြင်ကြားတွေကို ပိတ်လိုက်ပါ။ အခန်းထဲ ကယောက်ကယက်ဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အိုင်ဒီယာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
(၂) မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါကို ကြမ်းပိုးတွေပုန်းနိုင်မယ့်နေရာတွေကို သေသေချာချာပက်ဖျန်းပေးပါ။ ခဏနေကပြောခဲ့တဲ့ လှေဖာတဲ့ ပွဲညှက်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေ ၀ယ်လို့မရတာ ဒါမှမဟုတ် အနံ့အသက်မခံစားနိုင်တာမျိုးတွေအတွက် မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ (baking soda)က အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကြမ်းပိုးတွေအောင်းတဲ့ ကြမ်းပိုးသိုက်နေရာကို မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါများများလေးထား လိုက်ခြင်းဖြင့် ကြမ်းပိုးတွေဖယ်ရှားနိုင်တယ်လေ။
(၃) အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ ကြမ်းပိုးရှိနေရာတွေကို စိုစွတ်အောင်ပွတ်သုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့တည့်မတည့် မသိနိုင်တဲ့ ကြမ်းပိုးသတ်ဆေးတွေကို ၀ယ်သုံးမိတာထက် အယ်လ်ကိုဟော (alcohol)နဲ့ပွတ်သပ်ပေးခြင်းက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဓာတ်မီးတို့ မှန်ဘီလူးခုံးတို့သုံးပြီးကြမ်းပိုးဥနေရာရှာပြီး အရက်နဲ့စွတ်ပစ်လိုက်ဗျာ။
(၄) ပါကင်ထုပ်ရာမှာသုံးတဲ့ တိပ် (duct tape) ကိုသုံးပြီးလည်း ကြမ်းပိုးတွေကိုဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်။ ပြင်ညီမျက်နှာပြင်တွေ အတွက်ကတော့ တိပ်ကို မကြီးမသေးလေးတွေဖြတ်၊ ကြမ်းပိုးရှိတဲ့နေရာမှာ လှမ်းကပ်ယူ၊ တိပ်တွေအားလုံးပြန်စုပြီး အိပ်တစ်လုံးနဲ့လုံအောင်ထည့်ကာ ခပ်ဝေးဝေးအမှိုက်ပုံးထဲစွန့်ပစ်လို့ရတာပေါ့။
(၅) ရနံ့မွှေးဆီအသုံးပြုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ လာဗင်ဒါအဆီ (Lavender Essential Oil) ကို ကြမ်းပိုးတွေပုန်းနေတဲ့နေရာ မှာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ လာဗင်ဒါရနံ့ကို ကြမ်းပိုးတွေမကြိုက်ပါဘူး။ လာဗင်ဒါရနံ့ဆီကို မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ခူးထားတဲ့ လာဗင်ဒါပန်းတွေရယ် အရွက်တွေရယ်ကို ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ခပ်ကြဲကြဲဖြန့် ထားလိုက်ပါ။
(၆) ပူဒီနာအရွက် (mint leaves) တွေအသုံးပြုပြီးတော့လည်း ကြမ်းပိုးတွေကိုနှင်ထုတ်လို့ရပါသေးတယ်။ ပူဒီနာရနံ့သည် လည်း ကြမ်းပိုးများ မုန်တီးတဲ့ အခြားသောရနံ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြိတ်ခြေထားသော ပူဒီနာအရွက်တွေကို ကြမ်းပိုးတွေအောင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာထားပေးခြင်းဟာလည်း အိုင်ဒီယာကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဆိုဖာထောင့်တွေလို၊ သေတ္တာထောင့်တွေလိုနေရာမျိုးမှာ ပူဒီနာတွေကိုခြေပြီးထားလိုက်တာပေါ့။
(၇) ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်တော့ ဖုန်စုပ်စက်သုံးပြီး သူတို့ကိုရှင်းထုတ်လို့ရတာပါပဲ။ လက်နှိုက်လို့မရတဲ့ ထောင့်ချိုးတွေ၊ နေရာတွေက ကြမ်းပိုးကြီးတွေနဲ့ ကြမ်းပိုးဥတွေကို စုပ်ထုတ်လို့ရတယ်လေ။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်စုပ်စက်ကအိတ်ကို သေချာစည်းနှောင်ပြီး ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ခုထဲ သေချာထည့်ပြီးမှစွန့်ပစ်ရပါမယ်။ တစ်ခါသုံးပစ္စည်းတွေသုံးလို့ရရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့နော်။
(၈) ဖုန်စုပ်စက်လိုမျိုးပဲ အိမ်သန့်ရှင်းရေးမှာသုံးတဲ့ Steam Cleaner သုံးပြီး ကြမ်းပိုးကိုနှိမ်နင်းလို့ရပါတယ်။ အဆိုပါပစ္စည်းက အပူချိန်ပြင်းပြင်းကို ကြမ်းပိုးတွေမခံနိုင်ပါဘူး။ အကြိုအကြား လက်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာက ကြမ်းပိုးတွေကို နှိမ်နင်းချင်တဲ့အခါ Steam Cleaner ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(၉) Steam Cleaner အိမ်မှမရှိဘူးဆိုရင်လည်း ဆံပင်ခြောက်အောင်သုံးတဲ့ လေပူမှုတ်စက် (hair dryer) ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ hair dryer ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဗျ။ ဘာကြောင့်ဆို အပူချိန်အမြင့်ဆုံးခလုပ်ကိုသုံးပြီး ကြမ်းပိုးတွေရှိတဲ့နေရာကို မှုတ်ရမှာမို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀) အိပ်ရာခင်းတွေ၊ စောင်တွေ၊ လိုက်ကာတွေ စသဖြင့် ကြမ်းပိုးအောင်းခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို ရေပူပူနဲ့လျှော်ဖွတ် ပစ်ပါ။ အခြောက်ခံဖို့ဆိုရင်လည်း နေပူပူ နေပြင်းပြင်းထဲလှန်းဖို့ သို့မဟုတ် အခြောက်ခံစက်မယ် အပူချိန် အမြင့်ဆုံးခလုပ် သုံးပြီး အခြောက်ခံဖို့လုပ်ပါ။ စိတ်မချဘူးဆိုရင် နည်းမရှိရင်တော့ အိပ်ရာခင်းတွေ စောင်တွေကို ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲ လုံအောင်ထည့်ပိတ်ပြီး နေပူပူမှာထုတ်လှမ်းပေးရပါမယ်။
(၁၁) ကြမ်းပိုးအောင်းခဲ့လို့ရှင်းလင်းထားတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယအစုံကို နေပြင်းပြင်းမှာထုတ်လှမ်းပါ။ ကြမ်းခင်းကော်ဇော၊ ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းတွေ၊ မွေ့ယာတွေကို နေ့လယ်နေပူထဲ ပစ်ထားလိုက် တနေကုန်။
(၁၂) မွေ့ယာတွေ၊ဆိုဖာတွေကို ပလတ်စတစ်နဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက် ဖုံးအုပ်ထားပေးပါ။ သည်နည်းလမ်းက ကြမ်းပိုးတွေ အထဲမှာ ပိတ်မိနေဖို့လုံလောက်သလို သေဆုံးဖို့လည်း အကြောင်းဖန်ပါလိမ့်မယ်။ ပရိဘောဂ ခပ်သေးသေးတွေကိုလည်း သည်နည်းလမ်းအတိုင်းပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
ကြမ်းပိုးရှင်းရာမှာ တစ်ရက်တည်း ဆက်တိုက်ရှင်းဖို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သတိထားရပါမယ်။ ဘယ်အဆင့်ပြီးရင် ဘယ်ဟာ ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်း ကြိုစဉ်းစားထားရတာမျိုးရှိပါတယ်။ ကြမ်းပိုးကင်းပြီး ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်အိပ်စက် နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 1:08 PM
ထားဝယျဝကျသားဟငျး - ထိုငျးစတိုငျလျကွကျဥသုပျ - ငါးကြ...
❓ခြိုငျးခြှေးနံ့… သငျ့ကို စိတျအနှောကျယှကျဖွဈစလေား ❓
❓🕵️‍♂️ကှနျပြူတာမှာ Antivirus ကိုဘယျအခြိနျမှာ တငျသ...
အကောငျးမွငျစိတျရှိ လာအောငျဘယျလို ကွိုးစားကွမလဲ ... ?
Legal abortion - “အဖြေရှာရခက်တဲ့ ပုစ္ဆာ”
ငါး သံပရာပေါငျ -ကွကျသား သံပုရာပေါငျး -ကငျးမှနျ သံပ...
ကနျြးမာပွီး၊ ထုထညျကောငျးသော ဘျောဒီ ပိုငျဆိုငျရနျ